China Laser ဂဟေဆော်စက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Yunhua
ဖြတ်တောက်သောခေါင်းတွင်လေဆာရောင်ခြည်အလင်းနှင့်အာရုံခံကိရိယာတွင်အမြင့်ထိန်းချုပ်မှုယန္တရားရှိသည်။ Assist gas supply package သည်အောက်ဆီဂျင် (သို့) နိုက်ထရိုဂျင်ကဲ့သို့သောဓာတ်ငွေ့ကိုဂဟေဆော်သော ဦး ခေါင်းသို့ဖြန့်ဝေသည်။ စက်အများစုတွင်လေဆာရောင်ခြည်သုံးစက်ကို အသုံးပြု၍ စက်ကိုဖြတ်တောက်သောစက်ကို fiber-optic cable မှတဆင့်စက်ရုပ်သို့ဖြတ်ပေးသည်။
Yunhua သည်အကောင်းဆုံးတရုတ်လုပ်လေဆာစွမ်းအင်ကိုစျေးနှုန်းနှင့်တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးဖြင့်ဆက်သွယ်ပေးမည်။ ဖောက်သည်များ၏အခြေအနေမှန်နှင့်အညီအထူးဒီဇိုင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်စူပါကျော်ကြားသောလေဆာဂဟေဆော်သည့်စက်ရုပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းဆုံး ၅၀% လျှော့ချနိုင်သည်။
လေဆာစွမ်းအင်အရင်းအမြစ် parameters တွေကို
ပျမ်းမျှ output စွမ်းအား
စစ်ဆင်ရေး mode ကို စဉ်ဆက်မပြတ် / မော်ဂျူလာ
Maxi မော်ဂျူလာအကြိမ်ရေ （KHz）
core အချင်း （μm）
Output ဖိုင်ဘာအရှည် （m）
380 ± 10%， သုံးဆင့်ပံ့ပိုးမှု， 50-60HZ alternating current
450 × 240 × 680 (လက်ကိုင်ပါ ၀ င်သည်)
Q1 ။ လေဆာဂဟေလိုအပ်ရန်ကော။
A. ပစ္စည်းများအတွက်၊ ၎င်းသည်မြင့်မားသောရောင်ပြန်ဟပ်သောအရာများမဟုတ်ရပါ။ ၎င်းသည်လေဆာအရင်းအမြစ်ကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိမ့်မည်။
လျောက်ပတ်သောအမှားအတွက် ၀.၂ မှ ၀.၅ မီလီမီတာထက်နည်းရမည်။ အကယ်၍ ကွာဟချက်အလွန်ကြီးသည်ဆိုပါက၎င်းသည်လေဆာဖြင့်ဂဟေဆက်ရန်မသင့်ပါ။
ပန်းကန်၏အထူအဘို့, ပုံမှန်အားဖြင့် 5mm ထက်နည်းသည်
Q2 ။ လေဆာဂဟေစက်ရုပ်ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲ။
A. စက်ယန္တရားကောင်းစက်၊ ဂဟေဆော်သောမြန်နှုန်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းခြင်းစသည့်စက်ရုပ်လေဆာဖြင့်ဂဟေဆော်ခြင်းအတွက်အားသာချက်များစွာရှိသည်။
Q3 ။ စက်ရုပ်လေဆာဖြင့်ဂဟေဆော်ရန်လွယ်ကူပါသလား။
စက်ရုပ် arc ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအော်ပရေတာအတွက်လိုအပ်ချက်အချို့ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ အော်ပရေတာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ကြားမှုကိုလိုက်နာပါကစက်ရုပ်လေဆာဖြင့်ဂဟေဆော်ရန် ၃ ရက်မှ ၅ ရက်ခန့်ကုန်ကျမည်။
Q4 ။ လေဆာဂဟေစက်ရုပ်အတွက်အပိုပစ္စည်းများကော။
Q5 ။ ကြီးမားသောအထူပြားကိုဂဟေဆော်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ သီအိုရီအရအဲဒါကိုသုံးနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကုန်ကျစရိတ်ကများလွန်းတယ်၊
ရှေ့သို့ Mig စက်ရုပ် welding
နောက်တစ်ခု: Two Positioner နှင့်အတူ Axis စက်ရုပ်ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်